HomeWararka CiyaarahaKylian Mbappe oo ku biiraya Real Madrid hadaba heshiisku wuxuu ku dhow yahay inuu dhammaado.
January 21, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Qorshaha Kylian Mbappe uu ugu biirayo Real Madrid ee Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhow yahay inuu dhimo.
23-sano jirkaan ayaa dhacaya bilihii ugu dambeeyay ee kooxda uu kula jiro kooxda Mauricio Pochettino , warar ay soo baxeen warar la isla dhexmarayo oo ku saabsan heshiis kordhin waqti gaaban ah .
Si kastaba ha ahaatee, Mbappe ayaa xor u ah inuu wadahadalo la galo ajnabi ah oo ku saabsan heshiis horudhac ah, iyadoo Real Madrid si weyn loo filayo inay beeca xorta ah ku hesho xiddigii hore ee Monaco.
Khabiirka kubbada cagta Spain Gemma Soler ayaa sheegay in Real ay aaminsan tahay inay hadda qarka u saaran yihiin saxiixa Mbappe, isagoo u sheegay ESPN : “Hagaag, Real Madrid waxay weli u malaynaysaa inay ku dhowdahay heshiis la dhammeeyey.
” Florentino Perez aad ayuu ugu kalsoon yahay, xitaa haddii aysan si cad u sheegayn, dabcan si rasmi ah uma dhahayaan taas laakiin taasi waa waxa ay kaga hadlaan Aqalka Cad.
“Taasi waa waxa ay u maleynayaan, waxayna u maleynayaan inay sameeyeen dadaal badan, waxay isku dayeen xagaagii, xitaa waxay soo bandhigeen 200 milyan euro, waxay go’aansadeen inay sugaan.
“Sidaas darteed iyaga, ma jirto wax macquul ah – ugu yaraan taasi waa waxa ay ku yiraahdaan qaybaha ugu dhow – in aysan jirin suurtogalnimo ay ku sugaan hal xilli oo kale qandaraaskan yar ee PSG. Ma jirto wax fursad ah taas.
“Hadda waxay rabaan Mbappe sababtoo ah hadda lacag ayay haystaan, haddii aysan taasi ahayn waxay isku dayi doonaan inay la soo saxiixdaan saxiix kale oo xamaasad leh sida Haaland ama ciyaaryahan kale.
“Marka taasi waa booska Real Madrid, xitaa waxay u maleynayaan inay la soo saxiixan karaan ka hor dhamaadka xilli ciyaareedka, inkastoo aysan suurtagal noqon doonin ilaa xagaaga, taasi waa waxa ay hadda ku fekerayaan Madrid.”
Mbappe – kaasoo ku faanay 19 gool iyo 15 caawin 27 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan – ayaa durba meesha ka saaray rajada uu u dhaqaaqo Bernabeu bisha Janaayo.